I-Windows Subsystem yeLinux 2 iyatholakala ukuze ihlolwe | Kusuka kuLinux
Ezinyangeni ezedlule, izindaba zokuthi IMicrosoft izongeza i-kernel yangempela ye-Linux ngaphakathi Windows 10 Kumangaze wonke umuntu, manje lobu buchwepheshe sebulungele izivivinyo zokuqala.
I-Windows Subsystem yeLinux 2 (WSL 2) manje seyiza njengengxenye ye- Windows 10 Buka kuqala Yakha i-18917. Lokhu kwakhiwa kuyatholakala kubasebenzisi be-Windows 10 ababhalise ohlelweni lokuhlola uhlelo lokusebenza.
Njengaku-WSL 1, lesi sici asivunyelwe ngokuzenzakalela, kunalokho sidinga ukulungiselela nokwenza kusebenze ezinye izinketho ukuze sisebenze kahle.
I-WSL 2 iyatholakala ukuze ihlolwe
I-WSL isebenzisa ikernel lomdabu le-Linux, okusho ukuthi ukusebenza kangcono kokufunda / ukubhala, ukuguquguquka kwemiyalo eminingi kanye nemiyalo emisha yokubuka nokuphatha izinhlobo nokusabalalisa kwe-WSL.
Kuhambisana nento yokwenza ebonakalayo esebenzisa imemori encane ekuqaleni. Ukusetshenziswa kwememori akweqisi nhlobo futhi i-WSL 2 izibeka njenge- “ngokushesha okukhulu, okulula futhi okuphendulayo njenge-WSL 1."
Ukuphathwa kwenethiwekhi akusasebenzi kahle. UCraig Loewen weMicrosoft ubalula ukuthi banezinhlelo zoku “faka phakathi amandla wokufinyelela kuzinhlelo zokusebenza zenethiwekhi nge-localhost" ngokushesha ngangokunokwenzeka.
Ku Ibhulogi yokuthuthukisa iMicrosoft Ungathola imininingwane yezindaba nokuthuthuka okutholakala ku-WSL 2, futhi, ungathinta imibhalo ekhula nsuku zonke.
Ekugcineni, kufanele kukhunjulwe ukuthi bonke labo abanentshisekelo yokuzama i-WSL 2 bangangena ohlelweni lwe- I-Windows Insider bese ulandela imiyalo yeMicrosoft ukulanda ama-betas akamuva ohlelo lokusebenza.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » I-Windows Subsystem yeLinux 2 iyatholakala ukuze ihlolwe
IMicrosoft ibonakala yenza izinto kahle isikhashana manje. Noma okungenani okungcono.
I-Android Q izoletha iVulkan yawo wonke umuntu